Apple no tompon'andraikitra amin'ny iPad latsaka amin'ny varotra | Vaovao IPhone
Ny takelaka Apple dia tsy mandalo ny fotoanany tsara indrindra. Amin'ny ankapobeny, ny takelaka dia mijaly amina fihenam-bidy lehibe izay toa tsy misy farany, fa Apple, miaraka amin'ny fahamboniana tanteraka izay nankafiziny nandritra ny taona maro teo amin'ny tsenan'ny takelaka, dia toa tapa-kevitra ny tsy hanolotra vahaolana izay manampy amin'ny fandresena ny varotra ny iPad anao, vokatra iray izay raha tsy izy no nitondra tombony be indrindra taminao, dia ampahany manan-danja amin'ny orinasanao izy io nefa tsy hadinony fa sary io izay nanome ny anarany ho sokajy vokatra iray manontolo. ¿Apple dia azo omena tsiny noho io toe-javatra io? Amin'ny ankapobeny eny, ary omenay anao ny antony etsy ambany.
1 Tsena vaovao nandratra anao
2 Tsy misy fanavahana asa
3 Ny MacBook vaovao
4 iOS 9 sy WWDC dia mety ho famonjena anao
Tsena vaovao nandratra anao
Tsy nisy ny phablets rehefa navoaka ny iPad voalohany. Nandritra ny fotoana elaela, ireo izay te-hijery sarimihetsika na hivezivezy tsara dia mila fitaovana lehibe kokoa noho ny finday avo lenta, izay manana efijery kely manan-kery isan'andro, fa tsy ho an'ny asa hafa izay nopetahan'ny iPad tsara kokoa noho ny habeny. Na izany aza, ny fahatongavan'ireto finday smartphone goavambe ireto dia nanova ny fitsipi-dalao.
Tsy azo lazaina fa phablet dia misolo iPad, zavatra miharihary noho ny antony miharihary, fa eny efa maro ny mpampiasa tsy ho hitan'izy ireo ny filana mividy vokatra hafa ny fanananao smartphone be loatra ka mamela anao hanao ireo asa ireo amin'ny fomba mitovy amin'izany. Ny iPhone 6 Plus dia mpivarotra lafo indrindra. Ny fiheverana fa tsy mahazo aina amin'ny fitondrana azy ao am-paosinao dia mihoatra ny tambin'ny efijery lehibe kokoa, ny bateria maharitra kokoa sy ny efijery FullHD.
Tsy misy fanavahana asa
Ho an'ireo voalaza etsy ambony ireo dia tsy maintsy ampiana fa ny tena hatsaram-panahin'ny iOS 8 no mety ho antony lehibe mahatonga ny iPad hahita ny tsenany miha kely kokoa. ¿Inona no azoko atao amin'ny iPad izay tsy azoko atao amin'ny iPhone? Ny valiny dia tena sarotra omena, ary ny mora dia ny miteny hoe "Tsy misy" mivantana. Eny, misy fampiharana maro izay ny traikefan'ny mpampiasa dia tsaratsara kokoa amin'ny iPad noho ny efijery lehibe kokoa, saingy vitsy dia vitsy. Na dia misy zavatra holazaina aza, dia ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny iPhone dia afaka, ohatra, mifandray amin'ny Apple Watch, zavatra izay tsy ho vitan'ny iPad amin'ny fanapahan-kevitr'i Apple.
Apple dia tokony hanome ny iPad amin'ny asany manokana, manavaka ny iPhone, ka izay te hankafy azy ireo dia tsy maintsy mividy iPad. Ilay iray azo antoka fa maro aminareo no ao an-tsaina dia ny fanaovana multitasking amin'ny écran. Io fiasa io izay niseho tao amin'ny iray amin'ny iOS 8 Betas (nafenina, eny) ary momba izay tsy mbola nahenoanay na inona na inona avy eo. Ny efijery iPad dia mety tsara amin'ity fiasa ity. Azo antoka fa i Apple koa dia afaka mitanisa lisitra lava amin'ireo fiasa izay mety hananan'ny iPad manokana. iOS 9 amin'ny farany mety ho ny rafitra miasa izay mahatonga ny iPad ho fitaovana "pro".
Ny MacBook vaovao
Toy ny hoe tsy ampy izany ary vitsy ny "fahavalo" an'ny iPad, ny iPhone 6 Plus dia ampidirina ny MacBook ankehitriny. Ny sehatry ny matihanina dia efa niandry iPad Pro efa ela, lehibe kokoa ary misy endri-javatra mahomby kokoa, ary ny zavatra noraisin'izy ireo dia ny MacBook vaovao. Fitaovana misy habe, lanja ary fahaleovan-tena izay manakaiky ny iPad, fa misy ny fitaovana mamokatra avy amin'ny solosaina finday Apple, miaraka amin'ny fampisehoana Retina sy ny klavie feno izay tsy afaka nofinofisin'i iPad fotsiny.
Mazava ho azy fa samy hafa be ny vidiny, mazava ho azy. Tsy solosaina finday iray fa safidy ho an'ny mpividy iPad rehetra, fa ho an'ny maro izay tsy maintsy mividy solosaina finday hiasa, ary iPad no entin'izy ireo. Fitaovana tokana mampivondrona ireo fiasa tsara indrindra amin'ireo roa ireo no safidy tsara indrindra.
iOS 9 sy WWDC dia mety ho famonjena anao
Amin'ny volana jona WWDC 2015 no hatao, ny fivoriana izay hanehoan'i Apple ny lozisialy rindrambaiko amin'ity taona ity, na amin'ny finday na amin'ny solosaina. Mety izao no fotoana lehibe izay tsy anehoan'i Apple izay tokony "hamonjy" ny iPad. Ny lesoka amin'ny fianjerany dia Apple dia vaovao mahafaly, satria ilay orinasa Cupertino iray ihany no manana fitaovana hamonjy ny takelakao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Apple no tompon'antoka amin'ny fianjadian'ny iPad amin'ny varotra
Nora tezitra dia hoy izy:
Heveriko fa tsy niresaka momba ny tsingerin'ny fanavaozana lehibe kokoa noho ny an'ny iPhone ianao. Manokana, apetrako eo anelanelan'ny sy ny an'ny PC / Mac ity: ao anatin'ny 3-4 taona.
Raha izaho manokana dia tena faly amin'ny iPad Air-ko amin'ny maha fitaovana ampiasain'ny mpanjifa ahy (nahavita nandeha 15 andro tsy namono ny solosaina finday) aho. Fa raha ny fahitako azy, ny tsy fisian'ny fahasamihafana misy amin'ny iPhone ("iPhone lehibe io") dia mety hiafara amin'ny famonoana azy.
Valiny tamin'i Nora tezitra
BargainsHoy.com dia hoy izy:
Raha ny hevitro, rehefa feno ny tsenan'ny takelaka dia tsy isan-taona ny fotoana fanavaozana ny besinimaro fa amin'ny fotoana maharitra.
Amin'izay dia sarotra kokoa ny mivarotra raha vantany vao vita ilay parety.
Mamaly an'i ChollosHoy.com